Obbo Baqqalaa Garbaa: Ejjannoon nuti qabsoo karaa nagaarratti qabnu walfakkaata - BBC News Afaan Oromoo
Mul'atan Qaba: Kitaaba Obbo Baqalaan gara Afaan Oromootti hiikan
Kaleessi Ebla 04 bara 2018 guyyaa waggaa 50ffaa qabsaawaan mirga hawaasaa beekamaan, Dr Maartiin Luuter Kiingi itti ajjeefamaniidha.
Namoota kitaaboota nama qabsaa'aa kanaa gara afaan uummata isaanitti hiikuun maxxansiisanii dhiyeessan keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Ittaanaa dura ta'aa paartii Koongrasii Federaalawa Oromoo kan ta'aniifi dhiheenya mana hidhaatii kan bahan Obbo Baqqalaan,kitaaba Dr Maartiin hiikuun alattis, tooftaa qabsoo karaa nageenyaa gurra guddaa kan horataniiru.
Kitaaba Luba Dr Maartiin Obbo Baqqalaan gara Afaan oromootti hiikaniifi attamiin akka toftaa qabsoo nageenyaa isaanitiin akka itti hawwataman ilaalchisuun BBCn Afaan Oromoo, Obbo Baqqalaa Garbaatiif gaaffii dhiyeessee ture.
Kitaabota Maartiin Luuter Kiingi Xiqqichaa, 'Mul'atan Qaba' jedhu mullatoofi haasawaa addunyaa jijjiiran jedhamu gara Afaan Oromootti hiikuudhaaf maaltu akka isaan kakaase yeroo dubbatan Obbo Baqqalaan, kitaabni kun jalqaba akka tasaa harka isaanii galuusaa himu.
Mana hidhaa Qaallittii yeroo turanitti kitaabota argatanii dubbisaa turan keessaa tokko ture jedhu. Akkuman kitaaba Maartiin Luuter "I Have a Dream" jedhu dubbisaniin haala ofii keessa jiran, amantaa ijoollummaarraa jalqabee qabaataa turan waliin walfakkaatee argan.
"Akkasumas qabsoo amma ani keessa jiru waliin fakkaatee, walsimatee waanan argeefaniin osoon kitaaba kana sabakoo biraan ga'ee attam gaariidha jedheen gara Afaan Oromootti hiikee maxxansiisee osoon hin rabsiin deebiyeen mana hidhaa gale."
Qabsoo ookkara malee…
Maartiin Luuter Kingi Xiqqicha, Mahatama Gaandii akkasumas Niilsen Maandellaa dabalatee qabsoo karaa nagaa ta'etti amanu. Obbo Baqqalaa Garbaas ejjennoo qabsoo qabaniin akka isaan waliin walfakkaatan dubbatu.
Keessattuu jedhu Obbo Baqqalaan, ''Eejjannoon nuti qabsoo karaa nagaarratti qabnu walfakkaata,'' jedhaniiru. Lammileen gurraachota ta'an Ameerikaa hiddi dhaloota isaanii Afirikaa ta'an haalota isaan keessa turaniifi haalawwan uummanni Oromoo keessa ture xiqqoo waan walitti siqu fakkaatee argameef, malli isaan dhiibbaa jiru ofirraa faccisuun abbaa siyaasa isaanii, abbaa dinadgee isaanii ta'uun mirga isaanii ittiin kabachiifatan adeemsa okkara malee Maartiin Luuter Kingi Xiqqicha hordofeen ture.
Isa duras kan Mahatama Gaandii waliin walfakkaatu ta'ee natti mullate jedhu. "Akkuman kitaabota isaa dubbisaa deemeen adeemsi toora qabsoo isaa keessakoo seenaa deeme. Hundumtuu osoo karaa akkasiitiin deemee; jibbi kan keessa hin jiraanneen, jaalala qofaatiin, dhugaa qofaatiin mirga ofiif falmatanii bilisa ba'uun akka danda'amudha.''
Dhiiga osoo hin dhangalaasiin, osoo hin gubiin ykn waan biraa osoo hin barbadeessiin, nama biraarraan osoo rakkoo hin ga'iin bilisoomuun akka danda'amu hubadheera. Mala kana namni hunduu osoo fudhatee hojiirra osoo oolchee mala gaariidha jedheen fudhadhes," jedhu Obbo Baqqalaan.
Qabsoon karaa nagaa milkaa'aadhaa…?
Akka Obbo Baqqalaatti qabsoon okkara malee karaa nagana biyya kam keessattuu hojjechuu danda'a. Namoonni hedduun qabsoon okkara malee hammam milkaa'aadha jedhanii gaafatu.
Gurraachonni Ameerikaa hidda dhaloota Afirikaas bara durii warri adiin afaan qawweetiin malee mirga keenya nuuf hin kennan jedhanii qabsoo tooftaa okkora malee kana mormaa turan. Warri akka Maartiin Luuter Kingi Xiqqicha garuu ittiin milkaa'inaaf ga'aniiru, jedhu.
"Qabsoon waggoota dhiyoo asitti uummata keenya keessatii naannoo Oromiyaatti gaggeeffame akka eenyuyyu argutti qabsoo meeshaa hidhannootiin gaggeeffame ta'ee natti hin mullatu." Kan gaggeeffamaa tures diddaadhaan, lagachuudhaan akkuma kaleessa waarri gurraachonni Montigoomerii gaggeessan waliin walfakkaata.
Biyya keenya keessattis waggoota dhiyoo asitti mirgoota xiqqoo argannee itti fayyadamaa jirru qabsoo karaa nagaa akka laguutiin okkara malee gaggeeffameen dhufedha, jedhu. Akka Obbo Baqqalaatti tooftaan kun sirriitti baramee faayidaarra oollaan bifti ykn tooftaan qabsoo kana gitu tasuma addunyaarra hin jirus jedhan.
Kitaabonni Obbo Baqalaan barreessan maalirra jiru…?
Kitaabni isaan maxxansan yeroo ammaa sadarkaa maaliirra akka jirus ibsaniiruu, Obbo Baqqalaan. Kitaaba sana akkuma maxxansiisaniin waggaa darbe ji'a Muddee keessa waan hidhamaniif gabaarra oolchuu hin dandeenye.
Yeroo mana hidhaa jiranitti intalli isaanii Boontuu Baqqalaa guyyaa Ayyaana Irreechaa irratti akka dhiyeessitu itti himanii turanillee, mootummaan akka hin labsamne taasiseera jedhan. Kana malees jedhu Obbo Baqqalaan, hunduu kitaaba kana dubbisee nagaa biyya keenyaa keessatti ga'ee guddaa qabaata jedhanii yeroo marsaa lammaffaa hidhaa keessa turan kitaaba Maartiin Luuter Kingi Xiqqicha gara afaan Amaaraatti hiikanillee mootummaan akka jalaa fudhate dubbatu.
"Bakka adda addaa itti gurguramuun irra turettis hin gurguramne. Waan biraallee mitii manneen amantaa keessattillee akka hin gurguramne namoota sodaachisuun dhorkan. Kitaabni kun akka uummata biraan hin geenye taasifamee jira," jedhan.
Yeroo ammaa kana marsaa lammaafaan maxxansuudhaaf gulaalaafi foyyeessuurratti kan argaman Obbo Baqqalaan, gara Afaan Amaaraattis hiikaa akka jiraniifi kitaaba Maartiin Luuter Kiingi Xiqqicha kan biraa 'Fight For Freedom' jedhu 'Imala Gara Bilisummaatti'; jechuun gara Afaan Oromootti akka hiikan dubbatu.
Kana hunda yeroo dhiyootti uummata biraan ga'uudhaaf akka abdii qaban dubbatanii, kan kana godhanis maallaqa ittiin argachuudhaaf osoo hin taane addunyaan kun bakka nagaafi tasgabbii akka taatu gochuuf, akkasumas namoonni akka irraa barataniif akka nama tokkootti qooda fudhachuuf jedhu Obbo Baqqalaan.
Viidiyoo, Simannaa Obbo Baqqalaaf Istaadiyoom Adaamaa
Kantiibaan Finfinnee kaabinee haaraa ministira ittisaa fi miseensota paartii IZEMA fi ABIN of keessaa qabu ijaaran
Dr. Illeeniin UNtti damee dargaggootaaf hojii uumuu akka gaggeessituuf filatamte
Waa'ee dubartoota eegdoota Mu'aammar Gaadaafii turanii kana beektuu?
Mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffamuuf ajandaawwan ijoon maal ta'uu malu?
Dhalattuun Ertiraa dubartii sanyii gurraachaa miseensa parlaamaa Jarman jalqabaa taate
Yeroo dhuma kan haaromfame: 10 Caamsaa 2019
Mesiin garee PSG har'a Maanchister Siitii waliin taphatu keessa galeera